Samachar Batika || News from Nepal » के हो साढे सात दशा ? कुन राशिमा कस्तो दोष/असर र निवारणको उपाय जान्नुहोस
के हो साढे सात दशा ? कुन राशिमा कस्तो दोष/असर र निवारणको उपाय जान्नुहोस
ज्यातिषका अनुसार नवग्रहमध्ये एउटा ग्रह हो शनि । शनिको साढे सात वर्ष चल्ने एक प्रकारको दशालाई साढे साती दशा भनिन्छ । ज्योतिष तथा खगोलशास्त्रको नियमअनुसार सबै ग्रहको एउटा राशिले अर्को राशिको भ्रमण गर्छ ।
यसैप्रकार जब शनि ग्रह लग्नबाट बाह्रौँ राशिमा प्रवेश गर्छ । र उक्त राशिबाट अर्को दुई राशिलाई भ्रमण गरेर आफ्नो समय चक्र पूरा गर्छ । शनि सुस्त गतिमा चल्छ त्यसैले यसले एउटा राशिमा लगभग साढे २ वर्ष लगाउँछ । यसैप्रकार साढे सात वर्षको अवधिलाई साढे साती भनिन्छ
ज्योतिषका अनुसार साढे सात दशाले ठुलो अ’निष्ठ निम्त्याउँछ । मानिसको मृ’त्युसम्मै हुनसक्ने दशा हो, साढेसाती । शनिको दशा र बक्र दृस्टी जसमा पर्छ उनीहरुले शारीरिक समस्या, मानसिक क’ष्ट, आर्थिक क’ष्ट, र रोग आदि लगायतको समस्याहरु झेल्नु पर्छ ।
शनि ग्रहलाई न्याय र कर्मफलको कारक ग्रहको रुपमा चिन्ने गरिन्छ। अपवादका रुपमा मात्रै मानिसलाई साढे सात दशाले लाभ गर्छ । नत्र तपाईको दशाले पुरै परिवार अनि’ष्ट गर्छ साढेसातीले । शनिको साढे सातको दशा कुण्डलीको अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुन्छ । ज्योतिषको अनुसार शनि ग्रहको साढे सातको दशा ७ वर्षसम्म चल्छ ।
तर नआत्तिनुहोस् तर शनिदेवलाई खुशी पारेर तपाईले आफ्नो जीवनमा नयाँ उर्जा ल्याउन सक्नुहुन्छ । शनिको साढे सात दशाको दो’ष निवारण गर्न पनि सकिन्छ ।
–शनिबार पारेर फलामका सामाग्री शनिदेवको मन्दिरमा चढाउनुपर्छ ।
–हरेक शनिबार शनिको पुजा गर्नुहोस्
–पिपलको बोटमा पनि विशेष पूजा गर्नुहोस् ।
–खुर्सानीमा पानी छर्कनु पनि राम्रो मानिन्छ ।
–शनिबार कालो तिल दान गर्नुहोस्।
–ज्योतिष शास्त्रका अनुसार छालाका जुत्ता र चप्पल पनि दान गर्दा शुभ मानिन्छ।
–हरेक हप्तामा शमीको रूखलाई पनि पूजा गर्नुहोस्।
–हर शनिबार हनुमानको सामुन्ने सर्सुको तेलको दीप बाल्नुहोस् ।
–नुवाईधुवाई गरी हनुमान चालीसाको पाठ गर्नुहोस् ।
–मेष राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा कामको तनाव र चिन्ता बढि हुने भएकाले कुनै पनि निर्णय हतारमा नलिनू ।
–वृष राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा कुनै कुराको थालनी पूर्व आफन्त वा विश्वासी नाताका मानिससंग सल्लाह लिनू ।
–मिथुन राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा आर्थिक विषयमा सोचविचार गर्नू ।
–कर्कट राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा जान्नेबुझ्ने जानकार व्यक्तिसँग परामर्श गरेर अघि बढ्नू ।
–सिंह राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा कुनै पनि सवारी साधन प्रयोग गर्दा होस पुर्याउनू ।
–कन्या राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा नहतारीकन सुझबुझका साथ काम गर्नू
–तुला राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा प्राप्त भएको धन समेत हातबाट फुत्कने भएकोले ख्याल पुर्याउनू ।
–वृश्चिक मा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा अपजस तथा अ’वरोध खेप्नुपर्ने भएकोले होसीयारी हुनू ।
–धनु राशिमा शनिको साढे सातको समस्या देखा परेमा मेहनत अनुसारको फल पाउन सकिन्न । शं’का गर्नेहरु बढ्छन् । बे’चैनी बढ्छ । वि’वाद झेल्नुपर्छ । सचेत हुनू ।
–मकर राशिमा साढे सातको समस्या देखा परेमा ठुलो निर्णय लिनु चुक्नु हुने हुँदा सुझाव लिएर काम गर्नू
–कुम्भ राशिमा साढे सातको समस्या देखा परेमा खुट्टा तान्नेहरु सक्रिय हुने भएकोले शनिलाई प्रसन्न गराउर्नू
–मीन राशिमा साढे सातको समस्या देखा परेमा भाग्य अनुकूलता नभएमा जस्तो मेहनत गरेमा पनि बनेको काम फूत्कन्छ ।
–शान्त रहन हरेक शनिबार तेल दान गर्नुपर्छ।
आ–आफ्नो कर्ममा विश्वास गरौँ र सत्कर्म गरौँ, सबैको भलो सोचौ अवश्य नै शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आजको शनिबार शुभ रहोस ।
प्रकाशित मिति २० बैशाख २०७७, शनिबार ०३:३६